I-Tianjin Meijiahua Steel liqela leziko loqoqosho lwamanye amazwe, kubandakanya amashishini abumbeneyo kunye nokwenziwa: Tianjin Tiankang Metal Product Co., Ltd. Tianjin Tongfu Metal Product Co., Ltd. Inkampani: Meijiahua Trade Co., Limited ..
Inkampani yethu ikakhulu egxile ukungenisa elizweni izinto zentsimbi kunye neemveliso zesinyithi, kwaye kananjalo senza transit urhwebo, urhwebo lwasekhaya kunye nokusebenza arhente. Iimveliso zethu ziye zathengiswa eYurophu, eMelika, New Zealand, eJapan, South Korea, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, Afrika kunye Hong Kong. Sinabahambisi ekhaya nakumazwe aphesheya. "Umgangatho ophezulu, udumo kunye nenkonzo elungileyo" ngumbono wethu wolawulo. Ukusebenzisana ngokunyanisekileyo kunye nabahlobo kwihlabathi liphela kuphuhliso olufanayo.
Inkampani yethu ihlawule kakhulu ukukhulisa inqanaba lenkampani kunye nokuseka umfanekiso olungileyo. Inkampani yethu inenani elikhulu leengcali zobugcisa ezaziwayo. Iqhubele phambili kwinkqubela phambili yenkampani ngokukhawuleza kwaye yenza itekhnoloji yemveliso yenkampani, izixhobo zaba yinkokeli yehlabathi.
Inkampani yethu ijolise ekomelezeni ulwakhiwo lwebrand. Ifumene isihloko esihloniphekileyo "seShishini lokuhlonipha ikhontrakthi kunye neShishini lokuxabisa ngeKhredithi", kwaye yinkampani ebhalisiweyo ye-ISO9001. Uphawu lwethu lweTiankang Mesh lwawongwa uphawu lweTianjinfamous kunye nophawu lwentengiso oludumileyo. Iimveliso zithengiswa eYurophu, eMelika, eAsia nakwamanye amazwe ahambele phambili kunye nemimandla, kusebenza kwezolimo kwihlabathi liphela, iziseko zophuhliso, iintambo zonxibelelwano, izithuthi, ezomkhosi, kunye namanye amashishini, ukonwabela ukubonakala okuphezulu, ukuthembeka kunye nodumo kwiimarike zamanye amazwe nezasekhaya.
Ngomoya weshishini: Ukusekwa kweShishini, ukuLinywa kwaBantu, iiMveliso eziGqwesileyo kunye neNkonzo yokunyaniseka kunye nomgaqo weshishini: yenza ishishini elifanelekileyo ngokufanelekileyo, yenza ishishini lokusebenzisana ngokubambisana, wenze ushishino ngokuhlangeneyo, Inkampani yethu izinikele ngokupheleleyo ekuxhaseni iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu, inkqubo kunye inkonzo ebalaseleyo, kunye nokwenza ixabiso kubathengi njengoxanduva. jonga emva kumava adlulileyo Ekujongeni emva, inkxaso yoluntu ibalulekile kwimpumelelo kaMeijiahua; jonga kwikamva, iNkampani yethu iya kuqhubeka nokwenza isithembiso sokuphumelela, ukuzibophelela kuphuhliso oludibeneyo namaqabane kunye nokwenza umso ongcono kunye.
Umzi-mveliso kunye neSatifikethi